သရဝဏ်(ပြည်)(17 January 16) ﻿ ------------------------------------------------------------------------------------------
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ငန်းဇွန် ၊တောင်သာ ၊ မြင်းခြံနှင်. နွားထိုးကြီး မြို.နယ်များအတွင်း
အလိုက် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်များက လိုက်လံဖျက်သိမ်းနေသည်ဆိုသောသတင်းကို RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်က ၈.၁.၂၀၁၆ နေ.ညကထုတ်လွှင်.သွား၏ ။ ရပ်ရွာကလက်မခံသဖြင်. ခြင်္သေ.ပုံ အပါအဝင်ပြည်ခိုင်ဖြိုးရွာဟူသော
ဆိုင်းဘုတ်ကို ဖျက်ချပြီး ရွာနာမည် သက်သက်ကိုသာ ပြန်လည်စိုက်ထူကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည် ။ ------------------------------------------------------------------------------------------
ထိုသို.ဆိုလျှင် လွန်ခဲ.သော ဆယ်.ငါးနှစ်ခန်.မှစကာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးရွာဟုဆိုကာ ဒေသခံများကပဲတောင်းဆိုလို.လုပ်ရ
သလိုလိုဘာလိုလိုဖြင်. မြန်မာပြည်နေရာအနှံ.အာဏာပိုင်များစိုက်ထူးခဲ.ကြသော ရွာဆိုင်းဘုတ်တွေမှာဘာ
အဓိပါယ်ရှိပါသနည်း ။ တချိန်က ဝင်.ကြွားတောက်ပြောင်စွာရှိခဲ.ကြသော ရွာအဝင်မှခြင်္သေ.ရုပ်နှင်. ကြံ.ခိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်သည် ယခုအခါ ရွာသူရွာသားတို. အတွက်နှလုံးစိတ်ဝမ်း မချမ်းမြေ.ဖွယ်ရာ သင်္ကေတများ ဘာ.ကြောင်.ဖြစ်လာခဲ.လေသလဲ ။ အရာရာသည် ဥပဒေနှင်.မညီပဲ လူတစ်ယောက်၏ အမိန်.အာဏာနှင်.ဆောင်ရွက်ခဲ.သောကြောင်.ဖြစ်သည် ။
ဤဖြစ်ရပ်များကိုမြင်ရသောအခါ ကွန်မြူနစ်ဝါဒခေတ်ကောင်းစဉ်က ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏မြို.တော် မော်စကိုမှာ ဂုဏ်ယူဝင်.ကြွားစိုက်ထူထားခဲ.သော စတာလင်၏ ရုပ်တုကြီး ကို ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကိုရောက်
တော. မော်စကိုမြို.သားများက မကြည်.ချင်မမြင်ချင်သဖြင်.ဝိုင်းဝန်းဖြိုချလိုက်တာကိုသတိရမိသည် ။ ထိုနည်းတူပင် အီရတ်နိုင်ငံ၏ ဖိန်.ဖိန်.တုန်အောင်ကြောက်ရသော အာဏာရှင်ကြီး ဆဒ္ဒန်ဟူစိန်၏ရုပ်တုကြီးကို အီရတ်အား အမေရိကန်ဦးဆောင်သောမဟာမိတ်တပ်များ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်အပြီး ဆဒ္ဒန်ဟူစိန်ကျဆုံးသွား
သည်နှင်.တိုင်းသူပြည်သားများက ခွေးဆွဲသလို အရုပ်ကိုဆွဲဖြုတ်ချကာ တစ်စစီရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခံရတာကိုလည်း
သတိရမိလေသည် ။ ဤကမ္ဘာပေါ ်ဝယ် ဤဖြစ်ရပ်မျိုးနှင်.ဆင်တူသည်. ရုပ်တု ၊ဆိုင်းဘုတ် ဖြုတ်ချခံရမှုများ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပေါ ်ပ
ေါက်ခဲ.ဖူးသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ. မြို.တိုင်းရွာတိုင်းတွင် ငွါးငွါးစွင်.စွင်. ကြွားကြွားဝင်.ဝင်.တည်ရှိခဲ.သော မြန်မာ.ဆိုရှယ်
လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဟူသည်. ဆိုင်းဘုတ်များအားလုံးသည် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလအစဦးပိုင်းမှာပင် တစ်ခုမကျန် ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခြင်းခံလိုက်ရပေသည် ။ ဤဖြစ်ရပ်များဘာ.ကြောင်.ဖြစ်သနည်း ။ ----------------------------------------------------------------------------------
အဓိကအချက်မှာအာဏာရှင်များသည် သူတို.အာဏာရှိနေစဉ် ၊လုပ်ပိုင်ခွင်.ရနေစဉ်အတွင်း ပြည်သူလူထု၏ အားပေး
ထောက်ခံမှုကိုထည်.သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုပဲ လက်နက်နှင်.အနိုင်ကျင်. ၊လုပ်ပိုင်ခွင်.နှင်. အနိုင်ကျင်.ကာ သူတို.ကို လူတွေကထောက်ခံနေသယောင် အမှတ်တရဆိုင်းဘုတ်များ ၊ သူတို.ရုပ်ပုံဧရာမ ရုပ်တုကြီးများ ၊ပန်းချီကားကြီးများ ၊ ကိုလူစည်ကားရာနေရာများတွင်ပြုလုပ်စိုက်ထူထားကြလေ.ရှိသည် ။ အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်ထိုကဲ.သို.သော ရုပ်တု ၊ ပန်းချီပုံ ၊ဆိုင်းဘုတ်များကိုပိုမိုတွေ.ရလေ.ရှိသည် ။ အီရတ်၊အီရန် ၊ မြောက်ကိုရီးယား ၊ကျူးဘား စသည်. အကြောက်တရားဖြင်.အုပ်ချုပ်သည်.နိုင်ငံများတွင် ပြည်သူလူထုက
သူတို.ကိုထောက်ခံနေသယောင် အများကထင်လာစေရန် အာဏာရှင်များသည် သူတို.ရုပ်ပုံများ ၊ သူတို.ပါတီအမှတ်တံဆိပ်များကိုလူမြင်သာအောင် ကြီးမားခန်.ထည်စွာချိတ်ဆွဲဖော်ပြထားလေ.ရှိသည် ။ သူတို.၏လူကြိူက်မများလှသောအဖြစ်ကို ထိုသို. ရုပ်တု၊ ဆိုင်းဘုတ်များဖြင်. ဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးပန်းလေ.၇ှိကြသည် ။ ပြည်သူလူထုသည် သူတို.လက်အောက်တွင်ပြားပြားမှောက်ဒူးထောက်နေရစဉ်ကတော. မည်သူမျှ ထိုအရုပ်ကြီးများကို
မလိုလားကြောင်း ဆန္ဒမပြုဝံ.ကြ ။ အားလုံးကချစ်ခင်လေးစားနေသောအရုပ်ကြီးများသဖွယ် လူမြင်ကွင်းတွင်မိန်.မိန်.ကြီးရှိနေတတ်ကြပါသည် ။ အကြောင်းတစ်ခုကြောင်. ထိုအာဏာရှင်ကြီး ကျဆုံးသွားပြီဆိုသည်နှင်. ပြည်သူလူထုက အရင်ဆုံးမဆိုင်းမတွလုပ်ကြ
သည်မှာ အမြင်မတော်ဆင်တော်နှင်.ခလောက် မတန်မရာနေရာယူထားသော အာဏာရှင်ရုပ်တုကြီးကို အားလုံး၏
လက်များဖြင်. ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်ခြင်းပေတည်း ။ ထိုနည်းဖြင်.အင်မတန်တန်ခိုးထွားခဲ.ဖူးသော နာဇီပါတီ၏ တံဆိပ်သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မစတင်မီနှင်.စစ်ကြီးမပြီး
ဆုံးသေးမီက ဂျာမဏီနှင်.သူ၏ကိုလိုနီနယ်ပါယ်များအကြား တန်ခိုးထွားခဲ.သော်လည်း ယခုအခါ ဂျာမဏီနိုင်ငံဝယ် ထိုတံဆိပ်ကို လူမြင်ကွင်း၌ အသုံးပြုလျှင်ပင် ဥပဒေနှင်.မညီသောအဖြစ်သို.ဆိုက်လျက်ရှိပြီ ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းထိုအဖြစ်မျိုးတွေသည်မရိုးနိုင်အောင်ရှိခဲ.၏ ။ စစ်အစိုးရခေတ်က ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်.သည်တစ်မိုးလုံးဖျောက်ဆိပ်ဖြစ်ခဲ.၏ ။ နိုင်ငံတော်တွင် ဝန်ကြီးချုပ်အဆင်.ထက်မြင်.သော အတွင်းရေးမှူး (၁) ၊ တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေး ခေါင်းဆောင် ၊ ပညာရေးကော်မတီ၊ အားကစားကော်မတီ ဘာကော်မတီညာကော်မတီ အားလုံး၏ ဥက္ကဌ ၊ ထိုကဲ.သို.တပြည်လုံးကဖိန်.ဖိန်.တုန်အောင်ကြောက်ခဲ.ရသောဘဝက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်.၏ဓါတ်ပုံများသည် ဟိုအဆောက်အဦမှာ ၊ဒီရုံးခန်းမှာ ၊ဒီအသင်းမှာ လက်ညှို.ထိုးမလွဲအောင် ရှိခဲ. ချိတ်ခဲ.ကြပါ၏ ။ သို.သော် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်.နှင်.ထောက်လှမ်းရေးများ ကိုသက်ဆိုင်ရာမှအရေးယူခံရသဖြင်. အရာမှကျသွားပြီး နရသိမ်တွင်အကျဉ်းစံကြရသောအခါ အခြေအနေသည် မင်းလိုလိုက်မင်းကြိုက်ဆောင်ကာ ဗောင်းတော်ညိတ် စိတ်တော်သိဘိသည်.အလား ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါပေတော.၏ ။ တရားကျစရာကောင်းသည်မှာ ရန်ကုန်မြို. မင်းဓမ္မကုန်းမြေရှိ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားသည် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်.
ဦးဆောင်တည်ခဲ.သောဘုရားဖြစ်သည် ။ ထိုဘုရားသို.ရောက်တိုင်းတွေ.ရသည်မှာ လူဆယ်ရပ်ဆယ်.ငါးရပ်လောက်ကြီးမားသောဆီဆေးပန်းချီကားကြီးများဖြစ်
သည် ။ ----------------------------------------------------------------------------------
ထိုပန်းချီကားထဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်.သည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးတို.နှင်.
အတူ ရပ်ကာ ဘုရားတည်သည်ကိုညွှန်ကြားနေပုံကိုတွေ.ရသည် ။ ထိုဘုရားသို.ရောက်တိုင်း နိုင်ငံခြားသားများအားမကြာခနရှင်းပြရသဖြင်.ထိုပုံကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသည် ။ သို.သော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပင် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်. ရာထူးမှပြုတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျောက်တော်ကြီးဘုရား၏
ပန်းချီပုံများကိုကြည်.ရသည်မှာ ဟာတာတာနှင်.တစ်ခုခုလိုသလိုဖြစ်နေသည် ။ သေသေချာချာကြည်.မှ ပန်းချီကားထဲရှိဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန်.ပါဝင်သော နေရာကိုဆေးများဖြင်.ဖုံး၍ဖျက်ထားခြင်းဖြစ်နေ
သည် ။ အော် အာဏာရှင်တို.သည် မြှောက်စားချင်လျှင်လည်း မတန်မရာနေရာတွေပေး၍ချီးမြှောက်တတ်သည် ။ မလို၍နှိမ်.ချချင်ပြီဆိုလျှင်လည်း ပန်းချီကားထဲမှာပင် ရပ်တည်၍မရအောင်အငြှိုးတကြီးနှင်.လုပ်တတ်ပါလားဟု
ဆင်ခြင်မိပါသည် ။ ထို.ကြောင်. ကံကောင်း၍ အထက်သို.ရောက်နေခိုက်တွင် ငါတော်ငါတတ် ငါ.ကိုလူတွေထောက်ခံနေသည်ဟု တလွဲမထင်ကြရန်ဖြစ်သည် ။ ----------------------------------------------------------------------------------
စင်စစ် ပြည်သူလူထုက တကယ်မထောက်ခံပါပဲ ၊ ခေတ်ကာလတစ်ခုတွင် မိမိတို.ဘာသာခွင်ရိုက်လျက် လုပ်ပိုင်ခွင်.ရှိသောကြောင်. ကိုယ်.ကိုယ်ကို ဖော်ထားသော ရုပ်တု ၊ပန်းချီ ၊ဆိုင်းဘုတ်များမှာ လုပ်ပိုင်ခွင်.မရှိတော.
သောတစ်နေ.တွင်မုချပျက်ဆီးရမည် ။ ဥပဒေနှင်.မညီပဲ အမိန်.နှင်.အာဏာကိုအသုံးပြုကာအကောင်အထည်ဖော်ခဲ.သောကိစ္စများသည် အမိန်.နှင်.အာဏာ မှေးမှိန်လာသည်.တစ်နေ.တွင် အောက်သို.ပြန်ကျလာစမြဲဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တု၊ ဦးသန်.ရုပ်တု ၊
မဟာဗန္စုလရုပ်တု စသည်.တို.ကဲ.သို. ပြည်သူလူထုကချစ်ခင်သော အရုပ်များ ၊ဆိုင်းဘုတ်များသာ အချိန်ကာလ၏
တိုက်စားမှုဒဏ်ကိုခံကာသမိုင်းတွင်ကျန်နေရစ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။ သရဝဏ်(ပြည်) ----------------